Etu esi ede 3D XNUMXD - LucidPix
Etu esi ede 3D XNUMXD foto
Tupu ịmalite njem ịse foto 3D, ịkwesịrị ịma ihe ndị dị mkpa - otu esi ede 3D foto! Anyị na-enye gị nghọta site n'aka ndị ọkachamara na LucidPix iji nyere gị aka iduzi otu esi ewere foto gị mgbe ị na-agbapụ na 3D. Ndị ọkachamara a anọwo na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ teknụzụ 3D ruo ihe karịrị afọ anọ ma ọ bụrụ na ị na-agbaso ndụmọdụ na usoro ha, ị ga-enwe ike imeziwanye foto foto gị niile.
Maka ederede blog ndị ọzọ metụtara isiokwu a, lelee Otu esi ewere foto 3D kacha mma!
Nke 1: Gbalịa ịhapụ ihu
Gbalịsie ike na isiokwu foto gị doro anya maka ihe ndọpụ ọ bụla na nke a gụnyere aka n'elu ihu! Ọ bụ ezie na foto dị n'okpuru bụ ihe okike dị mma, aka nwere ike ọ gaghị ebufe nke ọma na 3D. Anyị na-atụ aro iji eserese gaa n'aka nri dịka ọmụmaatụ!
NDMỌD # # 2 More bokeh, ka mma
Gini bu bokeh i nwere ike iju? Bokeh bụ usoro foto eji etinye ihe a na-elekwasị anya n'otu isiokwu na oghere dị ya gburugburu cha cha, nke a kọwara na foto dị n'okpuru. Dị ka ọ na-ahụ anya nke ọma, ọ na-atụgharị nke ọma na 3D. Iji choo ihe ndi ozo banyere bokeh, lelee a isiokwu nwere nkọwa na nkọwa ndị ọzọ. I nwekwara ike lelee post blog nke anyị banyere bokeh.
Ntuziaka # 3 Tinye isiokwu zuru oke na etiti ahụ
Lelee foto dị n'okpuru maka ụfọdụ mkpali. Dịka ị siri hụ, isiokwu ahụ nwere ohere buru ibu ma akụkụ, ma elu ma n'okpuru, nke na-eme ka mmadụ niile nọrọ n'otu aka ahụ. N'oge usoro mgbanwe 3D, ọgụgụ isi mmadụ nke na-ekpebi omimi na foto ahụ na-amịpụta ihe n'ime. Ọ bụrụ na isiokwu gị dịkarịsịrị na nsọtụ nke foto ahụ, AI nwere ike ịpụpụ ha na usoro ntụgharị 3D.
NDMỌD # # 4 Zere ahịrị ndị dị gịrịgịrị
Mgbe ị na-ese eserese 3D, ọ kachasị mma ịzere ahịrị dị larịị. Ndị a nwere ike ịgụnye wires ma ọ bụ alaka, dịka ihe nwute, ha anaghị apụta nke ọma ma nwee ike mebie 3D ihe oyiyi gị mgbe ụfọdụ. Otu na-aga maka ụdọ njikọ fences ma ọ bụ ntutu isi, dị ka akọwara n'okpuru.
NDpMỌD # # 5 Zere ịfegharị ihe ma ọ bụ ihe na-egosipụta
Na foto mgbe nile, o doro anya na onyogho na onyonyo na-esiri ike ijide ma nwekwaa ya, a na-ahụ nke ọma karịa n'ime foto 3D. Ihe onyonyo dika nke di n’okpuru aputaghi nke oma na 3D, yabụ anyi na-atụ aro ka ị were foto nke isiokwu dị iche iche ka akọwapụtara ihe ndị ahụ ma dịkwa mfe maka AI hazie.
Nwee mmụọ nsọ!
Na-achọ ụfọdụ foto nlele? Chọrọ ụfọdụ peeji Facebook iji soro? Lelee Kachasị mma n'ime foto 3D nke LucidPix na LucidPix 3D foto na Facebook! I nwekwara ike isi na Instagram anyị @LucidPix ịhụ ụfọdụ nnukwu 3D vidiyo anyị mepụtara!
Foto 3D kacha amasị anyị na Facebook →← Ngwa ise kachasị elu maka Foto Foto